चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’ बारे यस्तो भन्छन् नायक नायिका, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’ बारे यस्तो भन्छन् नायक नायिका
काठमाडौ । फिल्मलाई मनोरञ्जनको उद्योग मानिन्छ। फिल्मले दिने पनि मनोरञ्जन नै हो। यदि यो सर्तलाई मान्ने हो भने आज शुक्रबार चैत १ बाट अल–नेपाल रिलिज भएको फिल्म ‘पुरानो बुलेट’ दर्शकका लागी राम्रो खुराक बन्न सक्छ।
नाम ‘पुरानो बुलेट’ भएपनि यसले युवा सपना, प्रेम र संघर्षलाई देखाएको छ। फिल्मले तपाईंलाई पूर्वी तराईको लेटाङमा पुर्याउँछ। रुख–बोट्यानले पालुवा फेर्दै गरेको मनमोहक मौसमलाई पृष्टभूमीमा राखेर रैथाने युवा–युवतीको कथा फिल्मले देखाउँछ।
फिल्मलाई भीषण राइले निर्देशन गरेका हुन्। लामो समय रंग पत्रकारिता गरेका राईले फिल्ममा पूर्वी तराईको भाषा, लवज, चालचलन, रीतिथिती टपक्कै टिपेका छन्। फिल्मका पात्रहरु यस्ता लाग्छन्, जो हाम्रै साथीभाई हुन्। हामीले दिनहुँ साक्षतकार गरिरहने कथा र परिवेश यसमा छ।
धामीझांक्रीको प्रथा, विवाह, मृत्यु जस्ता किराती संस्कार फिल्ममा देख्न सकिन्छ। तर, यस्ता संस्कारलाई जबरजस्ती घुसाइएको छैन, कथाको माग अनुसार त्यसको सिलसिला जोडिएको छ। ‘पुरानो बुलेट’ हेर्नेले किराती रहनसहन, पूर्वेली चालढालसँग साक्षतकार गर्न सक्छन्।
फिल्मको कथा लेटाङको बस्तीबाट सुरु हुन्छ । कथाका सूत्रधार हुन्, प्रताप राई । प्रताप राईको रुपमा अनुपविक्रम शाही देखापरेका छन्। प्रताप एक विन्दास र आफ्नो मर्जी अनुसार हिँड्ने युवा हुन् । उनलाई घर, परिवार, करियर केहीको परवाह छैन। उनको पुरानो बुलेट बाइक छ। त्यही बाइकमा हिँड्छन्। जग्गा बिक्री, ठेक्का पट्टा, पैसा उठाउने कामबाट प्राप्त हुने सानोतिनो रकमले मस्ती गर्छन् । यसरी मस्ती नै मस्तीमा उनको दैनिकी बित्दो छ।
उनलाई घर नजिकैकी एक युवती जमुना वर्षा सिवाकोटीले मन पराउँछ। जमुना शुसिल र सचेत युवती हुन् । उनी प्रतापको परिवारसँग निकट पनि छिन्। यस्तैमा इन्ट्री हुन्छ, बोनिका अर्थात माला लिम्बुको। अब प्रतापको जीवनमा नयाँ मोड आउँछ । कथामा उतारचढाव सुरु हुन्छ । त्यसपछि कथा कसरी अगाडि बढ्छ ? यसका लागि भने फिल्म हेर्नैपर्छ।
यो फिल्ममा युवाहरुको सपना र वाध्यतालाई उजागर गरिएको छ। अहिले नेपाली फिल्मको बजार ध्वस्त हुँदै गएको छ । फिल्मले दर्शक गुमाउदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा पुरानो बुलेटले एउटा चुनौती खेप्नुपर्नेछ, बजारको।
तर फिल्म मनोरञ्जनात्मक छ । यसले फुल डोजको मनोरन्जन पस्किएको छ। फिल्ममा हासो, रोदन, आवेग सबै छ । सन्तोष राई र भिषण राइले लेखेको फिल्मले दर्शकलाई फिल्म अवधीभर भरपुर मनोरञ्जन दिन्छ।